यसै हप्ता सरकार द्वारा तेस्रो मधेश आन्दोलनमा मारिएको मध्ये ५२ जनालाई सहिद घोषणा गरेका छन्। केहि दिन पहिला मोर्चाले आन्दोलनमा मारिएका ६१ जनाको नाम सहिद घोषणा गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेका थिए, जसमध्ये सरकारले ४१ जना आन्दोलनकारी
नेपालको धुलो,माटो र अन्धकार नै प्यारो छ
मलाई यहाको सुख सुबिधा, झिलिमिली भन्दा नेपालको धुलो,माटो र अन्धकार नै प्यारो छ । यहा सुख सुबिधा सबैछ, जीवन आनन्दमय पनि छ । नेपालमा भएको प्रदुषण र खानपानमा मिसावटका कारणले नेपालमा १० बर्ष छिटो मरिन्छ तै पनि मलाई नेपाल नै प्यारो लाग्छ । मान्छे
कहिलेसम्म सस्तो श्रम बेच्न विदेशिरहने ?
युवा दिवस मनाइरहँदा नेपाली युवामा हुर्कँदो एउटा अनौठो प्रवृत्तिको चर्चा नगरिरहन सकिँदैन । नेपाली समाजमा श्रमप्रतिको सम्मान गर्ने संस्कृतिमा एकदमै ह्रास आएको छ । यहा कोही मान्छे काम गरेकै आधारमा सानो र कोहीचाहि काम गर्नु नपरेकै आधारमा ठूलो
किन बुझिरहेको छैन समुदायले नर्सको भूमिका ?
नर्सहरुको समुदायमा गएर सेवा प्रदान गर्नुुपर्ने हुन्छ । यो सिलसिलामा विभिन्न प्रकारका समस्या पनि आउने गर्छन् तर पनि समुदायमा नजिकबाट बुझेर सेवा प्रदान गर्नुमा त्यसको पनि अलग आनन्द हुन्छ । हामीले पनि समुदायमा स्वास्थ्य सर्वेक्षण गर्न जाँदा
हिलारी एक मात्र योग्य उम्मेदवार हुन्ः ओबामा
आगामी नोभेम्बरमा अमेरिकाको ४५ औं राष्ट्रपतिका लागि हुन् गइरहेको निर्वाचनमा पूर्वविदेशमन्त्री हिलारी रोधम क्लिन्टन एक मात्र योग्य उम्मेदवार हुनुभएको वर्तमान राष्टूपति बाराक ओबामाले दाबी गर्नुभएको छ । अमेरिकाको डेमोक्र्यटिक पार्टीले अगामी
जसले दान गरिसके ५१ लिटजसले दान गरिसके ५१ र भन्दा बढी रगत
प्रेमसागर कर्माचार्य जसले १ सय ४६ पल्ट रक्तदान गरिसके । प्रत्येकपल्ट लिइने न्युनतम रगत ३ सय ५० एमएलको हिसाब निकाल्ने हो भने ५१ लिटर रगत उनले दान गरिसके । रक्तदान गर्न थालेको ३६ वर्षमा उनले अप्ठ्यारोमा परेकाहरुलाई सहयोग गर्न बगाएको पसिनाको
प्राकृतिक दृष्टिले समेत अति सुन्दर लाग्ने चितवन माडीको एउटा कुनामा रहेको वाल्मीकि आश्रम ऐतिहासिक रूपमा समेत प्रख्यात ठाउ हो । त्रेतायुगको कथा जोडिएको यो स्थानमा कुख्यात डाँकु रहेका रत्नाकरले ब्रह्मज्ञान प्राप्त गरेर महर्षि वाल्मीकि बनेक
प्र.म. के.पी. ओलीले संसदमा दिएको वक्तव्यको पूर्णपाठ
१. सरकारविरुद्ध प्रस्तुत भएको अविश्वास प्रस्ताव र यस क्रममा उठेका विभिन्न प्रश्नहरूका सम्बन्धमा सरकारको धारणा स्पष्ट पार्न यस व्यवस्थापिका–संसद समक्ष उभिएको छु।सरकारको गठन र विघटन, सरकारलाई विश्वासको मत र सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव एव
किन पछाडि पर्‍यो मधेस ? [विशेष रिपोर्ट]
१९५० को दशकमा औलो उन्मूलन भएपछि सरकारले ठूलो संख्यामा पहाडी बासिन्दालाई तराईमा झर्न प्रोत्साहित गर्‍यो । यसले पहाडको भूमिहीनताको समस्यालाई केही कम गर्‍यो । तर थारु र मधेसीहरूको जमिन पहाडेका हातमा पुग्यो । यसले ठूलो असन्तुष्टि सिर्जना गर्‍यो
दाम्लोमा बाँधिएका अपाङ्गलाई उद्धार गर्ने कसले ?
टिनको छानोको थोत्रो घर, मक्किएका बाँसका भाटाले बारबेर गरेपनि जताततै भ्वाङ छ । भित्र दुई छेउमा पुराना खाट । सँगै एउटा बेन्च । चिसो भुइँमा राखिएको थोत्रो सुकुल । त्यसमाथि लडिरहेका एक युवा । उनको बायाँ खुट्टाको गोलीगाँठोनजिक दाम्लो लगाइएको छ
ल्यु–साओचीको बिरालो र नया“ शक्तिको भविष्य
सन् १९५६ मा सोभियत समाजवादमा प्रतिक्रान्ति भयो । निकिता खुश्चेवले घोषणा गरे, ‘अबको रुसी समाज र राज्य शान्तिपूर्ण संक्रमण, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र सह–अस्तित्वका आधारमा अगाडि बढ्नेछ ।’ उनले रुसी समाजमा वर्गसंघर्षको अन्त्य भएको घोषणा मात्र
जनकपुरधामको स्वर्ग यात्रा
प्राचीन कालमा त तमाम नरनारी अनि महाउपकारीहरु स्वर्ग प्राप्ति हेतु मात्र बनारस नपुगी हुन्न रे, देखानी यता भने डुबानी उतै, किन्तु पत्तु अपुग भएका कति रङ्कहरु विच्चलीमा परेर कुशोकले मर्थे पनि । कति सुझले सिङारिएका मान्छे, स्वर्गरुपी रंगले ।
अचानक खस्यो सहिद शुक्रराज शास्त्रीको चस्मा उनको सालिकबाट । चस्माहीन उनको आँखा अनौठो देखिन थाल्यो । नाकको डाडीमा अडिएको चस्मा अकस्मात गायब हुँदा उनको नाक पनि असामान्य देखिएको थियो । उनको आँखा कहिले चिम्सा देखिन्थे त कहिले विस्फारित । नाक
नेतृत्वको खँडेरी र राजनीतिक भूमरी
सरकार परिवर्तनको हल्ला अन्ततः त्यत्तिकै सेलायो । तर तत्कालको लागि सेलाए पनि यो फेरि तात्नेमा शंका छैन । राजनीतिक पासा फाल्ने र परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने सत्ता खेलाडीहरुको कमी छैन । त्यसैले केही हप्ताको लागि मत्थर भएको यो खेल पुनरुक्ति नभई
याद गर, तिमीभन्दा माथि कानून छ !
न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाबाट अलग्गै स्वतन्त्र अंगको रुपमा विकास गर्ने कानूनी प्रवन्ध राणा शासनबाटै शुरु भएको थियो । जुद्ध शम्शेरका पालामा वि.स. १९९७ साल असार १२ गते नै नेपालमा कार्यपालिकाबाट न्यायपालिका अलग भई प्रधान न्यायलयको स्थापना